Soosaarayaasha Rakhda ah ee Soosaarayaasha Qalabka Mashiinka Qalalan ee dareeraha adag iyo dareeraha ah | YiZheng
Waa maxay Kala-soocidda Extrusion Solid-dareere ah?
Ku Ku marooji Kala-soocid adag oo dareere ah waa qalab farsameyn cusub oo biyo daadinta lagu soo saaray iyadoo la tixraacayo qalab kala duwan oo horumarsan oo kala baxa gudaha iyo dibeda isla markaana la isku daro khibradeena R&D iyo wax soo saar. KuKu marooji Kala-soocid adag oo dareere ah wuxuu inta badan ka kooban yahay kontoroolka kontaroolada, dhuumaha, jirka, shaashadda, fur-furka, soo-dejiyaha, miisaanka culus, qalabka dejinta iyo qaybaha kale, qalabkan si wanaagsan ayaa loo aqoonsan yahay oo si ballaaran loogu adeegsadaa suuqa.
1. Digada adag ee kala go'ida ka dib waxay ku habboon tahay gaadiidka iyo qiimaha sare ee iibka.
2. Kala soocida ka dib, digada ayaa lagu qasan yahay cawska si ay si fiican u walaaqdo, waxaa laga dhigi karaa isku-darka bacriminta dabiiciga ah ka dib marka la buuxiyo.
3. Digada lakala soocay ayaa si toos ah loogu isticmaali karaa si loo wanaajiyo tayada carrada, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu tarmo dixiriga dhulka, la beero boqoshaada loona quudiyo kalluunka.
4. Dareeraha kala go'ay wuxuu si toos ah u soo gali karaa barkada gaaska, wax soo saarka wax soosaarka gaaska ayaa ka sareeya, baaska gaaska hakin maayo in la dheereeyo nolosha.
Mabda'a shaqeynaya ee Kala-baxa Kala-baxa Qalabka-adag
1. Waxyaabaha waxaa lagu tuuraa mootada weyn iyadoo aan la xiraynin bamka slurry
2. Lagu galiyay qaybta hore ee mashiinka adoo tuuraya auger
3. Shaandhaynta suunka cadaadiska hoostiisa, biyaha waa laga soo saari doonaa lagana soo saari doonaa shaashadda mesh iyo tuubada biyaha.
4. Dhanka kale, cadaadiska hore ee auger ayaa sii kordhaya. Markay gaadho qiime cayiman, dekedda soo saarista ayaa loo furi doonaa wax soo saar adag.
5. Si loo helo xawaaraha iyo cabirka biyaha ee dheecaanka, aaladda xakamaynta ee hor taal mashiinka weyn waa la habeyn karaa si loo gaaro xaalad soo saaris ku qanacsan oo ku habboon.
Araajida & Waxyaabaha Lagu Kala Saarayo Kala-Bixinta adag-dareeraha
(1) Waxay leedahay codsiyo ballaaran. Waxaa loo isticmaali karaa digada digaaga, digada doofaarka, digada lo'da, digada duck, digada adhiga iyo digo kale.
(2) Waxay sidoo kale khuseysaa dhammaan noocyada noocyada waaweyn iyo kuwa yar yar ee beeraleyda ama dadka ku hawlan dhaqashada xoolaha.
(3) Qaybta ugu weyn ee Ku marooji Kala-soocid adag oo dareere ah Mashiinka waxaa loogu talagalay birta birta ah, marka la barbar dhigo walxaha kale, birta birta ma fududa in miridhku ku dhaco, daxalka, nolosha oo cimrigeedu dheeraado.
Ku marooji Extrusion adag-dareere SEPARATOR Video Display
Ku Xakamee Xayeysiinta Kala-soocida adag ee dareeraha ah
Ballaca mesh filter
Ballaca marinka laga galo mashiinka
Dekedda dareeraha ah
Mashiinka mashiinka wuxuu ka sameysan yahay bir tuuris, Auger usheeda dhexe iyo garbaha waxay ka sameysan yihiin bir bir ah 304, shaashadda shaandhada ayaa ka sameysan bir bir bir ah oo aan lahayn 304.
1. Ku quudinta mashiinka walaxda dareeraha ah
2. Ku quudinta buunshaha alaabada adag ee gobolka
Digada doofaarka 10-20ton / h
Digada doofaarka oo qallalan: 1.5m3/ h
Digada doofaarka 20-25m3/ h
Digada qallalan: 3m3/ h
Hore: Mashiinka Dufcadda Bacriminta Dynamic Dynamic
Xiga: Mashiinka Mashiinka Quudinta ee Vertical Disc